Baarlamaanka Nigeria oo gacanta iskula tegey - BBC News Somali
Baarlamaanka Nigeria oo gacanta iskula tegey
18 Sebtembar 2013
Image caption Baarlamaanka Nigria oo gacanta iskula tegey
Baarlamaanka dalka Nigeria ayaa gacanta iskula tegey muran dhex maray xubnaha baarlamaanka ka dib markii koox ka go'day xisbiga talada haya ee PDP ay isku deyeen inay ka dhex hadlaan baarlamaanka, dhinicii kalena ishortaagey.
Dagaalkani waxa uu ka dhacay aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi, iyadoo baarlamaanku uu ka soo noqday laba bilood in ku dhaw oo ay fasax ahaayeen. Weriyayaashu BBC-du waxay sheegayaan in mudanayaasha daacadda u ah madaxweyne Goodluck Jonathan ay bilaabeen inay ku qayliyaan kooxdii kale ee ka fallaagowdey, ka dibna uu halkaasi ka abuurmay dagaal gacan-ka-hadal ah. Dagaalkaasi waxa uu qaatay mudo 10 daqiiqo ah.
Xubnaha kooxda fallaagada ah ee ka go'day xisbiga haatan talada haya ee PDP iyagu ma doonayaan in madaxweyne Jonatahan uu mar kale isa soo sharraxo oo la soo doorto doorashooyinka soo socda ee ku aaddan sannadka 2015. Hasse ahaate madaxweynuhu ilaa iyo hadda iskii uguma dhawaaqin in uu doonayo in uu isa soo taago iyo in kale. Waxase si weyn ugu ololaynaysa afadiisa.
Weriye ka tirsan BBC-da oo goobtaasi ka ag dhawaa ayaa sheegay in uu arkayey laba mudane oo mid laga jeexjeexay shaadhkii uu gashanaa, aqalka baarlamaanka ee magaalada Abuuja dhexdeeda. Telifishankana waxa laga arkayey haweeney mudane ah oo ciddiyaheedii wejiga kaga fiiqday mudane kale, iyo mudanayaal kale oo kuraas isla dhacaya.
Xisbiga PDP waxa uu ku guuleysanayey doorasho kasta dalka Nigeria intii ka danbeysey inqilaabyadii milateri ee 1999, madaxweyne Jonathan-nna waxa uu xilkaasi madaxweynennimada hayeye ilaa sannadkii 2010.